चिनीया रेलको समाचारमा प्रतिस्पर्धा
२०७५ असार १० आइतबार ०६:४८:००
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल शनिबार तिब्बतको क्यूशीमा रहेको चाइना नेशनल मोर्डन एग्रिकल्चर पाइलट जोनको अवलोकनका लागि जाँदै । तस्बिर : हरि लामिछाने, ल्हासा, रासस
गत साताका दैनिक पत्रिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको समाचार संकलन र संप्रेषणमा भयो । सबै दैनिकले आआफ्नो ढंगले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र रेल आउने समाचारलाई निकै धेरै महत्त्व दिएर प्रकाशित गरेका छन् । शुक्रवार जेठ ८ गते प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूमा रेलमार्गसम्बन्धी समझदारी भएको समाचार प्रकाशित हुँदा नयाँ पत्रिकाले एक कदम अघि बढेर समाचार बनाएको छ । अधिकांश दैनिकका सम्पादकनै बेइजिङ गएर समाचार संप्रेषण गरेकोमा नयाँ पत्रिकाकी संवाददाता प्रमिला देवकोटाले उतैबाट पठाएको ‘रेलमा स्पष्ट : लगानीमा अस्पष्ट’ शीर्षकको समाचार अरूभन्दा अगाडि देखिन्छ । सो समाचारमा संवाददाता देवकोटाले रेलको संभाव्यता अध्ययन गर्ने कामपछि लगानी कसरी र कसले गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने बताइएको लेखेकी छन् । नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग अन्तर्वार्ता गरेर आफ्नो समाचारको वजन बढाएको छ ।
कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्माले संप्रेषण गरेको समाचारमा पनि लगानीको विषय उठाइएको छ तर धेरै महत्त्व दिइएको छैन । अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक राजाराम गौतमले संप्रेषण गरेको समाचारलाई भने डेस्कले अलि अव्यावहारिक शीर्षक दिएको छ । सम्पादकलाई प्रधानमन्त्री आफैँले “म रोमाञ्चित भएको छु,” नभनीकन त्यस्तो शीर्षक मनोगत देखिन्छ । विचार वा लेखमा भने यस्तो शीर्षक सुहाउँछ ।
चिकित्सक देवकोटालाई सम्मान
प्रख्यात स्नायु विशेषज्ञ डा. उपेन्द्र देवकोटाको असार ४ गते सोमवार देहान्त भयो । उनलाई आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि निको पार्न नसक्ने प्रकारको पित्त नलीमा क्यान्सर भएपछि उनले नेपालमै प्राण त्याग गर्ने निश्चय गरी बेलायतबाट फर्केका थिए । डा. देवकोटाको मृत्युको समाचारलाई हिमालय टाइम्स, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा कान्तिपुरले माथिल्लो समाचार बनाएर मंगलवारको पत्रिकामा प्रकाशित गरे । नयाँ पत्रिका तथा गोरखापत्रले भने यो समाचारलाई अन्यले भन्दा कम महत्त्व दिए । मंगलवार देवकोटाका पत्नी तथा तीन छोरीले दिएको दागबत्तीको समाचारलाई बुधबार कान्तिपुरले सबैभन्दा महत्त्व दिएर मुख्य तस्बिरसहित प्रकाशित ग¥यो । हिमालय टाइम्सले पनि यो दिनको समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दियो ।
गृहमन्त्री तथा भौतिकमन्त्रीबीच विवाद
यस साताका राम्रा समाचारमध्ये नागरिकले सोमवार असार ४ गते बनाएको समाचार पनि उल्लेख्य छ । यो समाचार ठेकेदारलाई समाउन नदिने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रतिबद्धता तथा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको विवादमात्रै होइन राजनीति कसरी चल्छ भन्ने बुझाइको दूरी पनि हो ।
थापाको निर्णयले माओवादी जनसत्ता आएको भए उनीहरूको देश चलाउने तरिका कस्तो हुन्थ्यो भन्ने पनि देखाउँछ । वास्तवमा ठेकेदारहरूले काम ढिला गरेर, भेरिएसनपछि भेरिएसन लिएर बदमासी गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् तर सबै प्रकारका बदमासीमा सिधै प्रहरी लगाएर पाता फर्काएर काम गर्न मिल्दैन । तिनले गरेको बदमासी खुट्याएर त्यसबापत् आर्थिक जरिवाना लगाउनु पहिलो सर्त हुनसक्थ्यो । यही समाचारको बक्समा नागरिकले कसरी मन्त्रीहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि सम्झन्छन् भन्ने अर्को राम्रो उदाहरणसहितको समाचार प्रकाशित गरेको छ । गृहमन्त्री तथ वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुरबस्नेत जेठ २० गते सडकमा गुडेका गाडीको प्रदूषण जाँच्न आफैँ पुगेको र कसैले मन्त्रीको सवारीको पनि प्रदूषण जाँच गरुँ भन्दा नमानीकन भागेको समाचार बनाएको छ । निकै दिनपछिको समाचार भए पनि नागरिकले कानुनको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने आफ्नो स्पष्ट सोच प्रकट गरेको छ ।
राजनीतिक बिचौलियाको प्रभुत्व
अन्नपूर्ण पोस्टले असार ४ गते सोमवार प्रकाशित गरेको राजनीतिक बिचौलियाको समाचार पनि उल्लेख्य छ । नेपालको न्यायालयमा विसंगति भएको र २९ थरीका बिचौलिया रहेको समाचार औपचारिक समाचार देखिए पनि सो पत्रिकाको न्यायालय स्वच्छतामा विकसित भएको सोचका रूपमा लिन सकिन्छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा फँसेका चारजना मजदुरलाई ३९ घन्टा पश्चात सकुशल उद्धार गरेको समाचारलाई कान्तिपुरले मात्र महत्त्व दियो । वास्तवमा यस्तो मानवीय रुचिको तुरुन्तै उद्धार गरेको समाचारमा थप खोजी गरेर त्यस कार्यमा तदारुकता देखाउनेलाई सम्मान गर्ने र जनताबीच चिनाउने काम अझ बढी गरिनु पर्थ्यो ।
सुन काण्डमा यो साता थप एक जना व्यापारी विमल कुमार पोद्दार पक्राउ परेका छन् । उनलाई तस्करीको सुन किनेको तथा तस्करीका लागि रकम हुन्डी गरेको आरोप लागेको छ । शनिबारको नयाँ पत्रिकाले नेपालका प्रख्यात चिकित्सकहरूलाई के कस्तो रोगले दुःख दिएको छ भन्ने रोचक समाचार प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिकाको सिर्जनशील सोचको प्रशंसा गरिनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका ७७ जिल्लाका जिल्ला सभापतिको भेला हेटौडामा भएको थियो । तर, राजनीतिक प्रभाव सकिएसँगै दैनिक पत्रिकाले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक र सभापतिको भेलालाई धेरै महत्त्व दिएनन् ।